Ra'iisul Wasaaraha DFKMG oo Toddobaadkan u Safraya Muqdisho
Wafti ka socda dawladda KMG oo booqanaya Gobal ka mid kuwii laga qaadacsanaa
Golaha wasiirada Soomaaliya ayaa maanta shirkoodii ugu horeeyay ku yeeshay magaalada Nairobi ilaa iyo marki Baarlamaanka Soomaaliya ansixiyay Xukuumada iyo Barnaamijkeeda Siyaasadeed
Axmed Muuse Cabdulle(Idaawaqaca) Naironi Keya
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Geedi
Wasiir ku xigeenka hub ka dhigista, Geescade
Kulankii ugu horaayay golaha wasiirada Jamhuuriyada Federaaliga ku meelgaarka ah ee Soomaaliya ayaa maanta si rasmiya uga furmay Hotelka Hilton ee Magaalada Nairobi.
Kulanka waxaa gudoominayay Raysulwasaaraha Soomaaliya Prof Cali Maxamed Geedi, waxaana xaadir ku ahaa inta badan xubnaha golaha wasiirada, wasiiru doowlayaasha iyo wasiiro ku xigeenada Jamhuuriyada Faderaaliga ku meelgaarka ah ee Soomaaliya.
Kulanku waxa uu furmay 10kii subaxnimo saacada Afrikada Bari ee Magaalada Nairobi.
Waxaana wasiiradii iyo wasiiro ku xigeenadii soo xaadiray tiradooda ahay 81 xubnood.
Waxaana hadalka furay Raysulwasaaraha Soomaaliya Prof Cali Maxamed Geedi, isaga oo sheegay hadal hordhaca ah iyo ajandaha shirka intaas ka dibna waxa uu codsaday in saxaafada iyo dadwaynaha kale ay ka baxaaan goobta shirka isagoo intaa raaciyay in markii kulanku dhamaado saxaafada u war siin doono.
Abarhii 2:15 Daqiiqo ayuu soo gaba gaboobay shirkii golaha wasiirada Soomaaliyeed waxaana saxaafada u yeeray raysulwasaaraha Soomaaliya Prof Cali Maxamed Geedi.
Waxa uuna hadalkisii ku bilabay Sidan: Salaan Diiran oo saxaafada u qaasa iyo bogaadin ka ka dib, Maanta oo ay taariikhdu tahay 15/1/2005 waxaan iskugu nimid shirkii ugu horeeyay ee Golaha Wasiirada Jamhuuriyada Faderaalka ku melgaarka ah ee Soomaliya, markii golaha Baarlamaanka Soomaaliya ansixiyay Xukuumada shirkaas waxaa lagu qabtay Hotelka Hilton ee magaalada Nairobi ajandihiisuna waxa ay ahaayeen labo qodob oo kalla ah sidan
Qodabka koowaad waa sidii loogu guuri lahaa wadanka Soomaaliya oo ay dowladu dalka Soomaaliya u aadilahayd waxna uga qaban lahayd masiibada iyo colaadaha Soomaaliya qaabkaas iyo Imkaaniyaadkiisa , ma ahan gudiyada aan halkan ku magacaabnay maanta ee kan ugu balaarani waxa uu tagi doonaa Magaalada Muqdisho oo ah caasimada Dalka ma ahan mid sahan u socda ee waa mid ka turjumaya qaybtii Koowaad ee guuritaanka Dalka loo guuri lahaa, gudigaas aniga ayaa hogaamin doona hadii alaha awooda lihi ogolaado, waxa kaloo halkan lagu magacaabay gudi qaabilsan taakulaynta dhamaan Golaha Xukuumada iyo Ergooyinki Soomaaliyeed ee Shirka ka qayb galay iyo qaybaha kalla duwan ee Jooga wadanka Kenya iyo sidii ayuguuri lahayeen.
Waxaan kaloon magacaawnay gudi kale oo la xaajoon doono deeq bixiyaasha iyo beesha caalamka sidii ay gacan uga gaysan lahaayeen Guuritaanka Doowlada ee dagdagta nagu ah.
Gudiga balaaran ee muqdisho ka dagi doona ee aan anigu hogaamin doono waxaa ka sii dhax bixi doona marki uu muqdisho tago gudi hoosaad iyaguna fariinta Xukuumada gaarsiindoona, Gobolada Shabeeada dhaxe Shabeelaha Hoose Hiiraan & Galguduud.
Halka dhinaca kale Asbuuca danbe ayanu dib umagacaabi doono iyagana gudiyo u shaqo taga Gobolada Jubooyinka, Bay iyo Bakool, Gedo iyo Puntland, Gudiyadaas macnahooda ma ahan in ay inta soo sahmiyaan hadana dib noogu soo noqdaan inagoo joogna Dalka Kenya laakiin waxaa war bixinada lagu kalla qaadan doonaa wadanka Soomaaliya gudihiisa.
Gudiga Muqdisho aniga ayaa hogaaminaya Farsamo ahaana waxaa diyaarinaya Raysulwasaare ku xigeenka ahna wasiirka Arimaha Gudaha Eng. Xuseen Maxamed Farax Caydiid , Gudiga Diyaarinaya taakulaynta iyo Deeqda lagu safri doono waxaa hogaaminaya raysulwasaare xigeenka ah wasirka maaliyada Dr Salim Caliyoow Ibroow.
Gudiga la doodaya Beesha Caalamka uu hogaaminayo raysulwaasare Xigeenka ahna Wasiirka Wasaarada Warfaafinta Dr Maxamuud Cabdulahi Jaamac Sifir.
Sadaxdaa raysulwasaare xigeen ayaa kalla hogaamin doona Gudiyada waxaana iskugu soo noqon doonaa shirka golaha wasirada Arbacada Fooda nagu soo haysa si ay gudiyadu warbixinadooda ugu keenaan golaha Wasiirada ka dibno loo go' aamiyo.
Dhinaca kale raysulwasaaraha Soomaaliya waxa uu shaaca ka qaaday in Afhayeenka Xukuumada uu yahay wasirka wasaarada Warfaafinta si buu yiri loo sugo midnimada Golaha Wasiirada isagoo sheegay in aan loo bahnayn in wasiir waliba waxa isagu rabo sheego.
Wafti uu hogaamnayo wasiiru dawlaha xiriirka Baarlamaanka iyo Xukuumadda Prof.Cabdiraxmaan Ibbi ayaa booqasho ku joogaa gobalka Shabeelada Hoose,ee dalka Somaaliya ayagoo soo indha-indheenaya xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ay wax yeeladu u gaysatay bad-karkii Tsunaami. Prof.Ibbi oo ay beeshiisu ku badan tahay Gobalkaas ayaa waxaa la sheegayaa in sii diiran loogu soo dhaweeyay magaalo madaxda gobalkaas ee Marka. waxuuna soo kormeeray marsada magaalada Marka isagoo warbixin ka dhagaystay masuuliyiin ka tirsan maamulka Gobalka sh/Hoose. sidoo kale waftigaas waxay maanta u gudbeen magaalada Baraawe oo iyana ay waxyeelada Tsunaami dad badan oo ka kalluumaysanayay xeebtaas kasoo gaareen dhibaatooyin la xiriira qalabkii ay ku kalluumaysanayeen oo baddu qaadday.
Booqashada waftiga ka socdaa xukuumadda lagu dhisay Embgaathi ee yimmid gobalka shabeelada hoose waxay ku soo beegantay xilli aan sidaa u fogayn oo uu guddoomiyaha gobalka Sh/hoose Sh.yuusuf Indhacade sheegay inuuna taageersanayn dawladda ka dhalatay shirkii Nayroobi, isagoo ku celceliyay marar badan in dawladda itoobiya ay ka dambayso dhisitaanka Dawlada federaalka ee KMG.ah. balse Immaaatinka wasiiradan waxay dhiiri gelin wayn u tahay xukuumadda KMG,ah oo marar badan aduunwaynuhu ku xireen aqoonsi iyo kaalmo la siiyo inay u guuraan wadanka si ay u noqoto xukuumad laga oggolyahay gudaha soomaaliya.
NewZealand: SHEEKH MAXAMED HAADI XAAJI OO GEERIYOODEY
Canada: Wasiirad Isku Casishey Arin La Xiriirta Pizza
...QORAALKII LOOGU AKHRISKA BADNAA 2001-2005
Wasiirro ka Socda DFKMG oo Ka Degey Garoowe
iyo Gudi Loo xilsaaray Magacaabista Golaha Maxakamada islamiga ah Ee Dagmada Guraceel oo... Guji...
Warar Googoos ah [Qubane 14/01/2005]
�Norway: Nin Soomaaliyeed oo diley Xaaskiisii oo 9-bilood ah
�DFKMG: Wafti loo diray Muqdisho inta aysan dowladda tagin
�Muqdisho: Shineemo lagu qarxiyay xamar.
�Wiilka uu dhalay Amiirka Ingiriiska & fadeexada midabtakoor
�Khartoum iyo Maanta | Warbixin
�Maradona Iyo Muuqaalkiisa Maanta
Wararka oo dhamaystiran ka akhri halkan... Guji Jan 14
Ra’iisul wasaare Cali Maxamad Geddi oo si aad ah uga faraxsanaa in dowladiisa ay hesho kalsoonida iyo Madaxweyne C/llaahi Yuusuf ayaa.. Guji.... Jan 13